फोर्डले भारतमा आफ्नो गाडी उत्पादन नगर्ने, नेपालमा बिक्री भएका गाडीको स्पेयर पार्ट्स के हुन्छ?
प्रकाशित मिति: Sep 10, 2021 3:42 AM | २५ भदौ २०७८
अमेरिकी गाडी उत्पादक कम्पनी फोर्ड मोटरले भारतमा रहेको प्लान्ट बन्दको निर्णय गरेको छ। २५ वर्ष अघि भारत प्रवेश गरेको यो कम्पनीले पछिल्लो दश वर्षमा दुई खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएपछि भारतको तामिलनाडु र गुजरातमा रहेको प्लान्ट बन्दको निर्णय गरेको हो।
कम्पनीका अनुसार सन् २०२१को चौथो त्रैमासिक देखि गुजरात प्लान्ट बन्द र सन् २०२२ देखि तामिलनाडुको प्लान्ट बन्द गरिनेछ। तर कम्पनीले निर्यातका लागि कारका इन्जिन भने उत्पादन गर्ने जनाएको छ। भारतमै प्लान्ट स्थापना गरेपनि कम्पनीको बजार हिस्सा दुई प्रतिशत भन्दा कम रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
'१० वर्षको अवधिमा हाम्रो संचालन खर्च नै दुई अर्ब डलर खर्च भएको छ। नयाँ गाडीको उत्पादन र विक्री पनि कमजोर देखिएको छ। हाम्रो मेहेनत बाहेक मुनाफाको दिगो यात्रा नै नदेखिएपछि हामीले भारतस्थित संचालित प्लान्ट बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं,' फोर्ड अन्तर्गत इण्डिया हेड अनुराग मह्रोत्राले भने,' नोक्सानी, इण्डस्ट्री ओभर क्यापसिटी र सोचेको भन्दा कम विस्तार भएपछि यो निर्णय गरिएको हो।'
भारतमा उत्पादित फोर्डका गाडी नेपालमा पनि बिक्री भएका छन्। नेपालमा जिओ अटोमोबाइल्सले फोर्डका गाडीहरु बिक्री भइरहेका छन्। फोर्डको फिगो र इको स्पोर्ट्स नेपालमा धेरै बिक्री भएको गाडी हो भने लक्जरी सेग्मेन्टमा इन्डेभर बिक्री हुँदै आएको छ। जिओले नेपाली बजारमा आक्रामक रुपमा फोर्डको गाडी बिक्री गर्दै आएको थियो। फोर्डले प्लान्ट बन्द गर्ने निर्णयले जि‌ओलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ।
भारतमा प्लान्ट बिक्री हुँदा नेपालमा के असर गर्छ? जिओ अटोमोबाइल्सका संचालक आकाश गोल्छाले थाइल्याण्ड, युरोप र अमेरिकाबाट आयात गरेर फोर्डको गाडी बिक्रीलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए। 'भारतको प्लान्ट बिक्री भएपछि हामीले अरु देशबाट गाडी मगाउनुपर्छ। हामीले फोर्डका गाडी बिक्रीलाई निरन्तरता दिनेछौं,' उनले बिजमाण्डूसँग भने।
थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकबाट मिड सेग्मेन्टको गाडी आयातको सम्भावना कम छ। अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेको इको स्पोर्ट्स र फ्री स्टाइल गाडी आयात हुने सम्भावना कम छ।
उनले प्लान्ट बन्द भएपनि आफ्टर सेल्स सर्भिस र वारेन्टी यथावतनै रहने जानकारी दिए।
'ग्राहक सेवालाई मध्यनजर गर्दै हामी फोर्डको विभिन्न मोडलका गाडी र स्पेयर पार्ट्स विक्रीलाई निरन्तरता दिनेछौं। कुनै कुनै मोडल भारतमा र विदेशमा उपलब्ध नहुने भएकाले अरु मोडल ल्याउँछौं,' गोल्छाले भने,'जस्तै एण्डेभरको सट्टा हामीले अब थाइल्याण्ड बाट एभरेष्ट ल्याउनेछौँ। त्यस्तै अरु नयाँ मोडल ल्याउने योजनामा छौँ।'
निकट भविष्यमा कम्पनीले मस्टाङको इभी (म्याक इ), एभरेष्ट, फ्ङ्को, टेरिटोरी लगायत मोडलको गाडी ल्याउने उनले जानकारी दिए। कम्पनीले छिट्टै मुलुकको भौगलिक संरचना मैत्री गाडी ल्याउन अध्ययन सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
'अब हामीले युरोप, अमेरिका, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकबाट गाडी आयात गरी विक्री गर्नेछौँ। यी मुलुकबाटै आयात गरिएपनि बजार प्रतिस्पर्धालाई मध्यनजर गर्दै उचित मूल्यमा गाडी विक्री गर्नेछौँं, ' उनले भने।
यस अघि जेनरल मोटर्स, हार्ले डिभिडसन लगायत प्रसिद्ध अमेरिकी कम्पनीले भारतमा आफ्नो प्लान्ट बन्द गरिसकेका छन्। भारतमा सुजुकी, हुन्डाई लगायत लो कस्ट कारले आफ्नो वर्चश्व जमाउँदै आएका छन्।